डिजिटल सम्पत्ति प्रबन्धन (डीएएम) मा शीर्ष २१ प्रवृत्ति २०२१ मा हुन्छ Martech Zone
२०२१ मा सर्दै, त्यहाँ केही प्रगतिहरू भइरहेका छन् डिजिटल सम्पत्ति व्यवस्थापन (DAM) उद्योग।
२०२० मा हामीले कोविड १ to को कारणले काम गर्ने बानी र उपभोक्ता व्यवहारमा व्यापक परिवर्तन देख्यौं। डेलोइटका अनुसार महामारीको क्रममा स्विजरल्याण्डमा घरबाट काम गर्ने व्यक्तिको स double्ख्या दोब्बर भयो। त्यहाँ विश्वास गर्न को कारण पनि छ कि एक संकट को कारण हुनेछ विश्वव्यापी रूपमा टाढाको कार्यमा स्थायी बृद्धि। म्याकिन्सेले उपभोक्ताहरू डिजिटल सेवाहरू वा खरीद प्रक्रियाहरूमा बृद्धि भइरहेको रिपोर्ट गरेका छन्, २०२० मा पहिले भन्दा धेरै ठूलो डिग्रीमा, दुबै B2B र B2C कम्पनीहरूलाई प्रभाव पार्दै.
यी कारणहरू र अधिकका लागि, हामी २०२१ सुरु गर्दैछौं बिभिन्न आधारमा जुन हामीले एक बर्ष पहिले अपेक्षा गरेका थियौं। जे होस् डिजीटलाइजेशन अहिले धेरै बर्षदेखि चलिरहेको प्रवृत्ति हो, त्यहाँ आवाश्यक कारणहरू छन् जुन आउँदो वर्षमा मात्र बढ्ने छ। र अधिक व्यक्ति टाढा टाढाका साथ काम गरिरहेका छन् - र उत्पादनहरू र सेवाहरू खरीद गरीरहेको छ र बढ्दो डिग्रीको लागि अनलाइन सञ्चालन भइरहेको छ - हामी डिजिटल सम्पत्तिको संख्या र समर्थन सफ्टवेयरको आवश्यकतामा उल्लेखनीय वृद्धि देख्नेछौं। त्यसकारण, यसमा थोरै शंका छ डिजिटल सम्पत्ति प्रबन्धन सफ्टवेयर आउँदो वर्षमा धेरै व्यवसाय र संगठनहरूका लागि महत्वपूर्ण काम प्लेटफर्म हुनेछ।
यस लेखमा, हामी नजिकबाट हेर्नेछौं २०२१ ले डिजिटल जेथा प्रबन्धन प्लेटफर्महरूको लागि भण्डार गर्यो र शीर्ष tre प्रवृत्तिहरू सूचीबद्ध गर्नेछौं जुन हामीलाई विश्वास छ कि यस बर्षको लागि सबैभन्दा प्रख्यात हुनेछ।
प्रचलन १: गतिशीलता र डिजिटल सम्पत्ति व्यवस्थापन
यदि २०२० ले हामीलाई एउटा कुरा सिकाएको छ भने यो गतिशील काम गर्ने बानीको महत्त्व थियो। टाढाबाट र उपकरणको बिभिन्न माध्यमबाट काम गर्न सक्षम हुनु, धेरै व्यवसाय र संगठनहरूको लागि एक निरपेक्ष आवश्यकताको लागि एक लाभबाट गएको छ।
जबकि डेम प्लेटफर्मले व्यक्ति र संगठनहरूलाई लामो समयदेखि टाढाको रूपमा काम गर्न मद्दत गरिरहेको छ, यो विश्वास गर्नु उचित छ कि सफ्टवेयर प्रदायकहरूले गतिशील कामलाई ठूलो डिग्रीसम्म सहज पुर्‍याउनेछन्। यसले धेरै डीएएम कार्यक्षमताहरू सुधार गर्दछ, जस्तै अनुप्रयोगहरू मार्फत मोबाइल उपकरणहरूको उपयोग वा सफ्टवेयर मार्फत सेवा (सास) सम्झौताको माध्यमबाट क्लाउड भण्डारणको लागि सुविधा जस्ता।
FotoWare मा, हामी पहिले नै अधिक गतिशीलता चाहने उपभोक्ताहरूको लागि तयारी शुरू गरिसकेका छौं। सासमा हाम्रो ध्यान बढाउनको साथसाथै, २०२० को अगस्टमा हामीले नयाँ मोबाइल अनुप्रयोग पनि सुरू गर्यौं, टोलीहरूलाई उनीहरूको DAM पहुँच गर्न र प्रयोग गर्न सक्षम गर्दै। तिनीहरूको मोबाइल उपकरणहरू मार्फत.
प्रचलन २: अधिकार व्यवस्थापन र सहमति फारामहरू
२०१ 2018 मा EU GDPR नियमहरू लागू भएदेखि नै व्यवसाय र संगठनहरूको उनीहरूको सामग्री र अनुमोदनहरूको ट्र्याक राख्न बढ्दो आवश्यकता परेको छ। अझै, एक व्यक्तिले यी नियमहरूको प्रभावकारी रूपमा पालना गर्न उपायहरू खोज्न संघर्ष गरिरहेका धेरै संगठनहरू फेला पार्न सक्दछन्।
गत वर्ष हामीले धेरै DAM प्रयोगकर्ताहरूलाई कार्यप्रवाह कन्फिगर गर्न समस्याहरूको समाधान गर्न मद्दत गरेका छौं GDPR लाई प्रासंगिक, र यो २०२१ मा पनि प्रमुख फोकस हुनुपर्छ। अधिकार प्रबन्धन र GDPR लाई प्राथमिकता दिइरहेका धेरै संगठनहरूको साथ, हामी विश्वास गर्दछौं कि सहमति फारामहरू धेरै सरोकारवालाहरूको इच्छा-सूचीमा एक शीर्ष स्थान हुनेछ।
AM०% DAM प्रयोगकर्ताहरूले छवि अधिकार व्यवस्थापनलाई मुख्य फाइदाहरू मध्ये एक मान्दछन्।
डिजिटल स्वीकृति फारामहरूको कार्यान्वयनको साथ, यो अधिक शक्तिको कार्यक्षमता हुनुपर्दछ, न कि GDPR प्रबन्धको सर्तमा, तर छवि अधिकारहरूको धेरै प्रकारका लागि।
प्रचलन:: डिजिटल सम्पत्ति प्रबन्धन एकीकरण
डेमको प्राथमिक कार्य समय र प्रयास बचत गर्नु हो। एकीकरण डीएएमको सफलताको लागि महत्वपूर्ण छ किनकि उनीहरूले अन्य कार्यक्रमहरूमा काम गर्दा सिधा प्लेटफर्मबाट प्रत्यक्ष सम्पत्ति फिर्ता लिनको लागि कर्मचारीहरूलाई सक्षम गर्छन्, जुन धेरैले धेरै गर्छन्।
उच्च प्रदर्शन गर्ने ब्रान्डहरू एकल विक्रेता सुइट समाधानबाट टाढा जाँदैछन्, सट्टामा स्वतन्त्र सफ्टवेयर प्रदायकहरूलाई प्राथमिकता दिँदै।
निस्सन्देह एक वा दुई विक्रेताको लागि बाध्य हुनुको सट्टा सफ्टवेयर छनौट र छनौट गर्ने थुप्रै फाइदाहरू छन्। यद्यपि कम्पनीहरूले उनीहरूको स्वतन्त्र सफ्टवेयरबाट अधिक फाइदा लिनको लागि सही एकीकरण हुनुपर्दछ। एपीआईहरू र प्लगइनहरू सान्दर्भिक रहन चाहने कुनै पनि सफ्टवेयर प्रदायकका लागि महत्त्वपूर्ण लगानी हुन् र २०२१ सम्म आवश्यक रहनेछ।
FotoWare मा, हामी हाम्रो याद गर्दछौं एडोब क्रिएटिव क्लाउड र माइक्रोसफ्ट अफिसका लागि प्लगइनहरू विशेष गरी मार्केटरहरू बीच लोकप्रिय हुँदैछ, साथ साथै संस्थाको PIM प्रणाली वा CMS मा एकीकरणहरू। यो किनभने धेरै मार्केटरहरूले बिभिन्न प्रोग्राम र सफ्टवेयरको भीडमा विभिन्न सम्पत्ति प्रयोग गर्नुपर्दछ। ठाउँमा एकीकरण गरेर हामी हामी फाईलहरू डाउनलोड गर्न र अपलोड गर्न आवश्यकता हटाउन सक्छौं।
प्रचलन 4: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डिजिटल सम्पत्ति प्रबन्धन
एक अधिक समय उपभोग गर्ने कार्यहरू जुन DAM सँग काम गर्दा मेटाडाटा थप्नेसँग गर्नुपर्दछ। ए.आई. कार्यान्वयन गरेर - र तिनीहरूलाई यो कार्य लिन सक्षम बनाउँदै - समय-सम्बन्धित लागतहरू अझ कटौती गर्न सकिन्छ। अहिले सम्म, धेरै कम DAM प्रयोगकर्ताहरूले यस प्रविधिको फाइदा लिइरहेका छन्।
यस अनुसार FotoWare उद्योग अनुसंधान २०२० बाट:
केवल%% DAM प्रयोगकर्ताहरूले एआईमा लगानी गरिसकेका छन्। यद्यपि १००% ले भविष्यमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने योजनामा ​​रहेका छन्, जसले उनीहरूको डेमको मूल्य बढाउँदछ।
Implementation 75% सँग यस कार्यान्वयन हुने समयको लागि चयन गरिएको समयसीमा छैन, सुझाव दिन्छ कि उनीहरू अझै प्रविधिको सुधारको लागि पर्खिरहेका हुन सक्छन्, वा उनीहरूलाई हालको बजारमा सम्भावनाहरूको बारेमा सचेत नहुन सक्छ।
तेस्रो-पार्टी विक्रेता र एआई-प्रदायकको लागि एकीकरण, इमेगा, पहिले नै FotoWare मा उपलब्ध छ, र हामी विश्वास गर्दछौं यस प्रकारको एकीकरणले मात्र लोकप्रियता बढाउनेछ। विशेष गरी जब एआई निरन्तर सुधार हुँदैछ र निरन्तर थप विषयहरू समयको रूपमा पहिचान गर्न सक्षम हुनेछ, र यसलाई अझ विस्तृत रूपमा गर्न।
अहिलेको रूपमा, उनीहरूले चित्रहरूलाई सहि र colorsहरूसँग पहिचान गर्न र ट्याग गर्न सक्दछन्, तर विकासकर्ताहरू अझै पनि उनीहरूलाई कला पहिचान गराउन काम गरिरहेका छन् जुन संग्रहालयहरू र ग्यालरीहरूको लागि उत्तम सुविधा हुनेछ। उनीहरूले अनुहार पनि राम्रोसँग चिन्न सक्छन् यस चरणमा, तर केहि सुधारहरू अझै कार्यहरूमा छन्, उदाहरणका लागि जब फेसमास्कहरू प्रयोग गरिन्छ, र अनुहारका केही भागहरू मात्र देखिन्छन्।
प्रचलन।: ब्लकचेन टेक्नोलोजी र डिजिटल सम्पत्ति व्यवस्थापन
२०२१ को लागि हाम्रो पाँचौं प्रवृत्ति ब्लकचेन टेक्नोलोजी हो। यो केवल बिटकोइन्सको उदयको कारणले मात्र होइन, जहाँ विकास र लेनदेनको ट्र्याक गर्न आवश्यक पर्दछ, तर किनभने हामी विश्वास गर्छौं कि प्रविधिको निकट भविष्यमा अन्य क्षेत्रहरूमा अझ प्रख्यात हुन सक्छ, डेम ती मध्ये एक हो।
DAM प्लेटफार्ममा blockchain लागू गरेर, प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो सम्पत्तिहरूको अझ बढी नियन्त्रण प्राप्त गर्न सक्दछन्, फाइलमा गरिएको हरेक परिवर्तन ट्र्याक गर्दै। ठुलो मापन मा, यो - समय मा सक्षम गर्न सक्दछ, उदाहरण को लागी, छवि टेम्पर्ड गरिएको छ कि छैन पत्ता लगाउन वा यसको एम्बेडेड जानकारी परिवर्तन गरिएको छ कि।
डिजिटल जेट प्रबन्धन निरन्तर विकसित भइरहेको छ, र फोटोवेयरमा हामी ट्रेंडहरू जारी राख्न यथाशक्य गर्छौं। यदि तपाईं हामी र हामी के प्रस्ताव गर्न चाहानुहुन्छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो विशेषज्ञहरू मध्ये एकसँग एक गैर-समिति बैठक बुक गर्न सक्नुहुनेछ:
Fotoware DAM विशेषज्ञहरुसँग एक बैठक बुक गर्नुहोस्
टैग: एडोब रचनात्मक बादलaiकृत्रिम बुद्धिblockchainblockchain प्रविधिसहमति फारामहरूबाँधबाँध एकीकरणबाँध सफ्टवेयरबाँध प्रवृत्तिडेलोइटडिजिटल सम्पत्ति व्यवस्थापनडिजिटल सम्पत्ति प्रबन्धन एकीकरणडिजिटल सम्पत्ति प्रबन्धन सफ्टवेयरडिजिटल सम्पत्ति प्रबन्ध प्रवृत्तिफोटोवेयरGDPRइमेग्गाMcKinseyमाइक्रोसफ्ट अफिसपिमअधिकार व्यवस्थापनप्रविधि प्रवृत्तिरुझान
छविग्गा: कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित छवि मान्यता एकीकरणको लागि एपीआई